eNasha.com - जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा...
जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा...
- प्रस्तुतिः अच्युत कोइराला
२०४४/४५ सालतिर होला ! उनी १२/१३ वर्षकी थिइन् । सरस्वती पूजा आउन लागेको थियो । सरस्वती पूजामा साधारणतया तराइमा रातभर जाग्राम बस्ने र सानोतिनो सांगीतिक र नृत्य कार्यक्रम हुने गर्दछ । त्यो बेला के गर्ने भन्दा स्कूलको तर्फाट एउटा सानो नृत्य समारोह राख्ने कुरा भइरहेको थियो । त्यसका लागि रिहर्सल गरिने भयो तर रिहर्सल गर्दा उनको नाच देखेर स्कूलकी मिस निकै रिसाउनु भयो, लोपार्दै भन्नुभयो- 'इस्स्, तैँले त नाचेर खालिस् !' चित्त दुखेर आयो उनलाई र त्यसपछि डिस्को डान्स चलचित्रको रिमिझिमी... गीतमा नाचिन् र त्यसलाई 'राम्रै' मानियो ।
साथीहरुको अघिल्तिर मिसले त्यसो भनेको देखेर उनको कलीलो हृदयमा ठूलो चोट पर्‍यो । साथीहरुको सामुन्नेमा उनले आफूलाई अपमानित ठानिन् । यसैबीच स्कूल छुट्टी भयो र उनी सानीमाको घर जनकपुर घुम्न भनी गइन् । छुट्टीमा सिनेमा हेर्नु नै थियो, हेर्न पुगिन्- नागिन । श्रीदेवीद्वारा अभिनित यो चलचित्रको नृत्य खूब रुच्यो । अर्को दिन पनि उनले दोहोर्‍याइन् र गीत 'मैं तेरा दुस्मन...' लाई ऐनामा हेरिहेरी उनले खूब अभ्यास गरिन् । जबजब कार्यक्रम हुन्थ्यो, उनले त्यही नागीनको गीतमा नाचिहाल्थिन् । उनको यो नृत्य यति लोकप्रिय भयो कि उनको नाम नै नगीना हुन पुग्यो ।
"मेरो अनुहार हेरेर नै तपाइँले बदमास हो भनेर छुट्याउन सक्नु हुन्छ", भर्खरै अमेरिका फर्कनु केही समयअघि इनशाडटकमलाई उनले भनिन्- "एक दिनको कुरा हो, कोही केटाले मेरो मिल्ने साथी विमलालाई चिठ्ठी पठायो । हामी तीन जना असाध्य मिल्थ्यौँ । म, विमला र मन्दिरा थियौँ । विमलालाई कसैलाई चिठ्ठी पठायो । हामीले सोध्यौँ- तँलाई मन पर्छ - "अँ हँ", साथीले उत्तर दिई । "अब के गर्ने ? बदला लिऊँ", मेरो सुझाव थियो । हुन्छ भन्ने सहमतिपछि त्यो केटालाई कुर्न थाल्यौँ । हामीभन्दा सिनियर थियो, हामी सात कक्षा पढ्थ्यौँ । टिफिनको समयमा जहिले पनि आउने हुनाले त्यही समयमा उसलाई बदला लिने कुरा बन्यो । र, हामीले एउटा योजना बुन्यौँ- "त्यो केटाकहाँ सरासर जाने, त्यसको अघिल्तिर लब लेटर च्यात्ने र उसलाई चप्पलले हिर्काउने ।" "अनि उसले कुट्यो भने ?" विमलाले शंका व्यक्त गरी । "हामी छँदै छौँ नि", सारंगाले हिम्मत दिइन् ।
विमला त्यसपछि टिफिन टाइम कुर्न थालिन् । नभन्दै त्यो केटो आयो, केही साथीहरुका अघिल्तिर पहिलेझैँ गफ दिन थाल्यो । सारंगाले विमलालाई उक्साइन्- "जा त्यसको अघिल्तिर चिठ्ठी पनि च्यातिदे र त्यसलाई चप्पलले गाला चड्काइदे ।" केटालाई चप्पलले गालामा डाम बसाउने कुराले विमला अत्तालिई । तर उनले ढाढस दिइन् । "ऊ गई, केटाको अघिल्तिर पुगेर उसले केटोको कुममा हातले कोट्याई । केटोले उसतिर हेर्‍यो । विमलाले प्रेमपत्रलाई ध्यार्रध्यारी च्यातिदिई । त्यसपछि हतारहतार चप्पल खोलेर दुइ जुत्ता हानी । केटोको पारो तात्यो । रिसले कालोनीलो हुँदै त्यसले विमलालाई कुट्न तम्सियो । तर यो रमिता हेरिरहेका हामी आएर कुट्न दिएनौँ । उल्टै जथाभावी उसलाई गाली गर्‍यौँ, 'केटी मान्छेलाई हात हाल्न तँलाई लाज लाग्दैन ? तैँले अर्काकी छोरीलाई लब लेटर लेख्न पाउँछस् ?' पछि यो घटनाले निकै ठूलो रुप लियो र यो योजना बुनेका कारण मलाई हेडसरका अघिल्तिर उभ्याइएको थियो", सोफामा अडेसलाग्दै ती रमाइलो क्षण उनले सम्झिइन् ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने- नगीना फिल्ममा नाचेपछि उनको नाम नै परिवर्तन भयो । अरुले उनलाई नामले भन्दा पनि फलानोकी छोरी नगीना भन्थे । त्यसबेला खोलामा नुहाउन ठूलो रमाइलो हुन्थ्यो । एउटा साथीलाई लिएर उनी खोलामा नुहाउन जाँदैथिइन् । त्यही बेला, एउटा किराना पसलको पसलेले भन्यो- "देख देख नगीना गेले ।" उसको सरारती टोन थियो, त्यो बोलाइमा । उनलाई कसोकसो चित्त बुझेन । उनी हक्की स्वभावकी थिइन् र उससित भिड्न पुगिन् । ठिंग उभिएर फरक्क फर्किइन्, त्यसले आफ्ना काला दाँत देखायो । "तु केकरा कहिल्ये नगीना ? केकरा कहिल्ये ?" सारंगा कड्किन थालिन् । "तोरा कहिल्छे के ! हम एसे बतिया रहेल्छे, दोस्त से", आफूले गल्ती गरेँ भन्ने भावले सच्याउन खोज्यो । "कत्ते छे तोरा दोस्त हँ ?" उनी अझ कडकिन्- "हमरा जिस्कावैछे ?" ठूलो स्वरका कारण वरिपरि निकै ठूलो भीड लागिसकेको थियो । भीडका कारण केटो निकै डरायो र घरभित्र लुक्यो । ऊ लुकेपछि सारंगाको हौसला अझै बुलन्द भयो । उनी झन् ठूलो स्वरले कड्किन थालिन्- "तोरा जुत्तेजुत्ते से मार के दाँतसाँत गिरा देवे । गिन्ते रहे जेवे, बुझ्ले कि न ? बाहर निकल ।"
पछाडिबाट एउटा आवाज आयो- "बैनी छोड्दिनुस्, साला यो मधीसेहरुको बुद्धि हुँदैन । माफ गरिदिनुस् ।" यो विशुद्ध नेपाली भाषामा गरिएको अनुरोध थियो । उनले पछाडि फर्केर आवाज आएतिर हेरिन् । एउटा अधवैंशे मानिस देखिन् । एउटा विशुद्ध मधेशी पहिरन लगाएको पक्का मधेसीको त्यो अनुरोध सुनेर मेरो उनको रिस गायब भयो र त्यहाँ एउटा हास्य सिर्जना भयो- जसका कारण उनले आफ्नो रिस नै भुलिन् । यस्तो बदमास थिइन्, आफूले भनेको कुरा नै हुनुपर्ने जिद्दी स्वभावकी । तर पछि उनमा त्यो भावना विस्तारै हराउँदै गयो ।
नृत्यप्रति उनको यति रुचि थियो कि बिहे बटुलामा जाँदा रातभरि नाचेर बिहानै बनाइदिन्थिन् । यस्तो क्रेजी थिएन् उनी नृत्यप्रति ।
स्कूलस्तरीय नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदा उनलाई नै सम्झिइन थालियो । सर्लाही जिल्लास्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा उनले कति पटक वीरेन्द्र शील्ड नै जितेकी थिइन् । यस्तै कार्यक्रममा एक पटक संगीतकर्मी प्रदीप बमजनले सारंगाको मोहक नृत्य हेर्न पुगेका थिए । उनको नृत्यबाट प्रभावित भएर बमजन सोधिसोधि उनको घर पत्ता लगाए । उनले सारंगातिर औँला सोझ्याउँदै भने- "यी नानीको भविष्य ज्यादै उज्ज्वल छ । यिनलाई नृत्यमा नै लगाउनुस् ।"
काठमाडौँबाट आएका बमजनको भनाइलाई उनका पिताले साह्रै आना सही मानेर उनलाई २०४७ सालमा काठमाडौँ पठाइदिए । काठमाडौँमा उनले नाचघरमा नाटक, नृत्यको जागीर खान थालिन् । यसपछि उनको वास्तविक कलाकारिता शुरु भयो ।
त्यतिबेलै उनले 'अमिट वासना' टेलिड्रामामा अभिनय गरिन् । उनको सानो भूमिका थियो । त्यसपछि 'सत्असत्' । भिडियो फिल्म 'कमारो'मा एउटा सानो भूमिका पाएकी थिइन् । त्यसपछि 'मायाजाल'मा खेलिन् ।
"एक दिन अचानक हातमा हेलमेट लिएर एउटा व्यक्ति छिर्‍यो- 'सारंगा बैनी को हुनुहुन्छ ?' मेकअपबाहिर मलाई धेरैले अर्कै देखिन्छ भन्छन् । शायद उहाँले मेकअपबाहिर देखेकाले झन्नै नचिन्नु भएको हुनसक्छ । उहाँले ठूलो पर्दाको सिनेमाको प्रस्ताव लिएर आउनु भएको रहेछ । त्यसबेला ठूलो पर्दाको सिनेमा भन्ने बित्तिकै ठूलो कुरा हुन्थ्यो । उहाँले मिलन सिनेमाका लागि आइटम डान्स लिएर आउनु भएको थियो । मैले त्यो आँखा चिम्लिएर स्वीकार गरेँ । यो सिनेमा मेरालागि किन महत्वपूर्ण छ भने यसपछि मैले मेरो जीवनमा काका बुवाजस्तै एउटा अभिभावक पाएकी थिएँ । वसन्त श्रेष्ठ मेरो जीवनमा त्यति महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । उहाँको सही निर्देशनले मलाई यहाँसम्म आइपुग्न ठूलो मद्दत गरेको छ", कोटेश्वरस्थित डेरामा उनले पंक्तिकारलाई बताइन् ।
मिलनपछि भाउजूमा चार सिनका लागि काम गरिन् । राजेश हमालको भतिजी भएर उनले खेलेकी थिइन् । केही वर्षमै उनलाई केही राम्रा सिनेमाको प्रस्ताव आयो । जसले उनी एउटी राम्रो कलाकारको रुपमा चिनिन थालिन् ।
हे संगीता !
पहिला म नगीनाको रुपमा चर्चित थिएँ, त्यसपछि नीरमाया सिनेमामा नीरमाया भनेर । सुनचाँदीपछि त मलाई संगीता नै भन्न थाले । यो गीतको हल्ला यति ठूलो थियो कि संसदमा समेत यसको हल्ला भएछ । मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सांसदहरुले कसले कस्तो लुगा लगाउँछ भन्दा पनि बढी महत्व गाउँको विकास, शहरको योजना र देशका बारेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो !
केही समयअघि मैले श्रीमानलाई लिएर असन गएको थिएँ । केही केटाहरुले हे संगीता भनेर जिस्क्याए । मैले चाहिँ त्यो सुनेको नसुनै गरिरहेँ । मेरो श्रीमानले भन्नुभयो- "आइ थिङ्क, दे आर कलिङ यु ।" "यस् दिस् इज् वन अफ माई फिल्म सङ", मैले उहाँलाई बताएँ । त्यसपछि त के थियो र, मलाई उहाँले बोलाउनु परे उहाँले नै भन्न थाल्नुभयो- "हे संगीता ! कफी प्लीज !"
एउटी पीडित केटीले आफ्नो बलात्कारको बदला लिन माओवादी बनेको भूमिकामा आगो सिनेमामा म छानिएकी थिएँ । मलाई त्यतिबेला त्यो चरित्र मात्र बदला लिने चरित्र हो भन्ने ठानेकी थिएँ । के कारणले त्यो भूमिका विशिष्ट हो भनेर मैले थाहा पाएकी थिइनँ । तर झन्नै ६ वर्षको ग्यापपछि पनि आगोको रिसुट गर्ने कुराले म पुलकित भएँ । किनभने त्यहाँ पहिले गर्न नसकिएको काम अहिले थपिएको थियो । एउटा वास्तविक जुझारु माओवादी कमाण्डरको भूमिका बनाइएको छ । पहिले मेरो फोटो पोष्टरमा सबैभन्दा मुनि र सानो टाउको हुने गर्दथ्यो, अहिले त्यो टाउकोको आकार बढेको छ र अरु नायिकाभन्दा माथि राखिएको छ । त्यसबाट थाहा हुन्छ, समयले कस्तो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ । मलाई लाग्छ, अहिले त्यो सिनेमामा मेरो भूमिकाको वास्तविक न्याय भएको छ ।
मैले कहिले पनि भूमिकाको बारेमा दुःखी हुनु परेन । किनभने मैले सबैजसो भूमिका खेलेँ । त्यसैले मलाई कुनै पार्टिकुलर रोल रोनाधोनाका लागि मात्र सुहाउने भनेर कुनै ठप्पा लागेन । सिनेमामा काम गर्दै जाँदा मेरालागि आमा-बुवापछि तीन जना व्यक्तिले मेरो जिन्दगीमा नभुल्ने गुन लगाएका छन् ।
वसन्त श्रेष्ठ, नारायण पुरी र अशोक शर्मा मेरो जिन्दगीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन् । वसन्त श्रेष्ठले एउटा छोरीजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । अशोक शर्माले मेरो करियरमा केही गरेर देखाउने मौका दिनु भएकाले म बिर्सन सक्तिनँ । नारायण पुरीले चाहिँ सहयोगी हुनुहुन्छ । उहाँ चाहिँ दुःखसुखको साथी हुनुहुन्छ । अमेरिका जाँदा अमेरिकाका लागि जुन टिकट मेरो हातमा थियो, त्यो उहाँले नै काटिदिनु भएको थियो । अरु पनि जिन्दगीमा धेरै सहयोगी बनेर आएका थिए । तर महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ उहाँहरु नै हो ।
नीरमाया - शोषित नारीको विषयमा बनेको सिनेमा । बलात्कारीहरुसँग डराएर बस्नु हुँदैन, त्यसको विरुद्ध लड्नु पर्छ भन्ने सन्देश थियो ।
सुनचाँदी - त्यसको गीतका कारण ।
मोहनी - मैले यसमा एउटा वन साइडेड लबरको भूमिका खेलेको थिएँ ।
आगो - एउटा क्रान्तिकारी कमाण्डरको भूमिका ।
नयाँ नायिकामा मलाई सञ्चिता लुइटेल ज्यादै मन पर्छ । ऊ मलाई गुडियाजस्तो लाग्छ । म उसलाई बोलाउँदा पनि गुडिया नै भन्छु ।
कहिल्यै सोचिनँ, म विदेश जाउँली र त्यतै बसुँली । तर त्यस्तै भयो । मसँग त सन् १९९७ देखि नै अमेरिकाको भिसा थियो । सिनेमा कम बन्न थाल्यो, भोकभोकै हुने अवस्था हुन लाग्यो । त्यही बेला मैले निर्णय गरेँ- विदेश त जानै पर्छ । र, म २००१ मा अमेरिका गएँ ।
धूलो मैलो खेल्दै, संघर्ष गर्दै गाउँबाट काठमाडौँ आएर चलचित्र खेलेर एउटा नाम बनाएर आइपुग्दा कहिलेकाहीँ मेरो जीवन सिनेमाकै कथा पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।
फोटोहरुः नवराज वाग्ले
अभिनेत्री ग्ल्यामर रोचक क्या बात ! कन्ट्रोभर्सी सोच फिल्म फेस्टिबल निर्देशक नवीनता पार्टी घोषणा पेज3अभिनेता कार्यक्रम रोमान्स सेक्स सञ्चारकर्मी प्रविधि